Wararka - Isbedelada isbeddelka
Astaamaha sifiican loo diiwaangeliyey ee SPC - gaar ahaan sifooyinkeeda aan biyuhu xirin - ayaa ah meelaha muhiimka ah ee lagu iibiyo RSAs. Muujiyay waa Axiscor's Pro12.
Qaybta 'LVT', koritaanka adkeysiga ee koritaanka culus, waxay arkeen isbeddelada waaweyn qaarkood inay dhacaan 2019. Laga soo bilaabo hoos u dhaca riixitaanka rogrogmi kara ee ku sii kordhaya xudunta adag iyo SPC iyo cunteyntiisa qeybta WPC, LVT waxaa waday dhowr arrimood oo cusub.
"SPC waa qaybta ugu dhaqsaha badan ee soo kordhaysa iyadoo ay ugu wacan tahay bilicsanaanta weyn, guryaha aan biyuhu la socon, iska caabinta saameynta, xasiloonida cabbirka iyo qiimaha guud," ayuu yiri Ana Torrence, oo ah maamulaha qaybta adag ee dusha sare, injineerada dabaqyada. "Sifooyinkaan, oo ay weheliso sahlanaanta rakibidda, waxay dardar-gelisay kobaca caan ka ahaanshaha kooxdan xilli ay rakibayaal aqoonyahanno ah gabaabsi yihiin."
Kormeerayaasha warshaduhu way oggol yihiin, shirkadda SPC waxay qayb ahaan qayb ka qaadanaysaa qaybaha kale iyadoo ay ugu wacan tahay sifooyinka waxqabadkeeda. "Saddexda weeyn waa xasiloonida cabirka, telegraafida iyo heerkulka," ayuu yiri Jeff Francis, oo ah agaasime waaxeed adkaysi leh, qaybta guryaha, Shaw Industries. "Waana ay sii socotaa inay qabato. Uma maleyneyno in SPC la dhammeeyay-weli waxaan ku jirnaa wareegga koritaanka ka hor intaanan ku dhicin meertada nolosha oo aynaan bilaabin sarreynta. Ma arko in la beddelayo illaa hal-abuurnimo kale oo weyn ay soo socoto."
FCNews cilmi baaris ayaa muujisay in hal sano qeybta hoose labanlaabantay dhanka mugga iyo in kabadan labo jibaar marka loo eego doolarka. Sida laga soo xigtay cilmibaarista, qayb-hoosaadka ayaa loo tiriyay 37.1% ee suuqa LVT marka loo eego doolarka deegaanka ama $ 1.126 bilyan, oo u dhiganta $ 490 milyan sanadka 2018. Marka la eego mugga deganaanshaha, SPC waxay tirisay 33.4% suuqa LVT ama 667.5 milyan cagaha laba jibbaaran, marka la barbar dhigo 335.5 milyan oo laba jibbaaran sanadkii 2018.
Ololaha SPC ee dhiggiisa WPC wuxuu ku cadyahay tirooyinka. FCNews cilmi baaris ayaa muujisay WPC inay hoos u dhacday 17.4% marka loo eego doolarka ilaa $ 929 milyan sanadka 2019, marka loo eego $ 1.125 bilyan ee sanadka 2018. Marka la eego mugga, WPC waxay hoos u dhigtay 16% ilaa 429 milyan cagaha isku wareeg ah sanadka 2019, marka loo barbardhigo 511 milyan dhudhun laba jibaaran sanadka 2018.
Ed Sanchez oo ah ku-xigeenka maareynta wax soo saarka ee shirkadda 'Mohawk Industries' ayaa yiri "Wax yar oo aan adkeysi lahayn [maalgalin] ayaa ku jirta kobcinta awoodda WPC," "Adduun ahaan, waxaan u maleynayaa inaad arki doontid dad eegaya inay u wareejinayaan wax soo saarkooda WPC una wareejinayaan SPC. Tiro aad u yar oo SKU intros cusub ah oo lagu sameeyay goobta ayaa ku jiray WPC. Taasi waa isbeddelka sii socon doona ilaa aan ka aragno hal-abuurka soo socda."
Markii aan isbarbar dhignay WPC iyo SPC, Kurt Denman, oo ah madaxa suuq geynta, Congoleum, wuxuu yiri, "Kama iibinaysid wax sifooyin waxqabad ah WPC ilaa SPC, laakiin waxaad kuheleysaa qiime aad ugafiican. Marka, waxaan u maleyneynaa inay wali sii socoto inay noqoto qaybta sii kordheysa, waxayna u wareejineysaa dhammaan WPC illaa SPC. "
Mohawk's Sanchez wuxuu sharraxay in sifooyinka waxqabadka ee WPC iyo SPC ay u muuqdeen macaamiil badan oo bilaabay wareegga shan-illaa-lix-sano ee wareega 2019. "Waxay arkeen in WPC, in kasta oo ay qurux badneyd, aysan lahayn adkeysi la mid ah kan SPC-da cusub sameeyo, "ayuu sharraxay. "Marka, waxaad arkeysaa xog badan oo ka soo laabatay macaamiisha oo markii ay dhaqaajiyaan qaboojiyeyaasha iyo sariiraha culus - arka aragga. Taasi waxay abuureysaa wacyigelin kordheysa, waxayna SPC ku siineysaa dhammaan faa iidooyinka [WPC] iyadoo lagu xallinayo qaar ka mid ah arrimahaas. "